Gaarisa: Xildhibaano dacwad ka gudbiyey ciidanka amaanka Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xildhibaanada Baarlamaanka Kenya ee ka soo jeeda Gobolka Woqooyi Bari Kenya ee ay Soomaalida degto ayaa dacwad u gudbiyey maxkamad ku taalla dalkaa, kadib markii boolisku jirdileen dad Soomaali ah.
Xubnaha xildhibaanada Barlamaanka Kenya ee laga soo doorto gobolka Waqooyi-Bari Kenya ayaa sheegay inay maxkamadda sare u gudbiyeen dacwad ka dhan ah ciidamada amniga Kenya oo lagu eedeeyay inay duleedka Gaarisaku jirdileen dhalinyaro Soomaalida Kenya.
Masuuliyiinta gobolka Woqooyi Bari ayaa sheegaya inay jiraan tiro dhalinyaro ah oo ciidamadu ay kala baxeen guryahooda kuwasoo maydadkooda qaar la helay, halka kuwo kalena aan nolol iyo geeri lagu hayn.
Xildhibaan Maxamed Shiidiye ayaa u sheegay Idaacada VOA in tallaabada ay sameeyeen Ciidamada Kenya, gaar ahaan dhacdadii ka dhacday duleedka Gaarisa ay tahay mid aad u fool xun oo aan la aqbaleyn.
“Arrintaas aad ayaa uga xunahay hadaan nahay Mudanayaasha Gobolka Woqooyi Bari, arrimaha gaarisa ka dhacay, ma ahan dhaqan wanaagsan, waxay ka hor imaaneysaa xuquuqda bani’aadanimada” ayuu yiri Xildhibaan Shiidiye.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sheegay in dhalinyaro guryahooda lagala baxay aan illaa iyo hadda la garaneyn meel la geeyay.
Sawirro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa miijiyey saraakiil ka tirsan ciidamada amaanka Kenya oo garaacaya dhallinyaro Soomaali ah oo xabadka dhulka loo dhigay.